Muwaadinkii ugu talo-da xumaa taariikhda Somaliland waa Maxamed Baashe
Wednesday March 25, 2020 - 09:04:16 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Isagoo dhalinyara guri diiran kasoo toosa oo mustaqbalkiisii oo dhan hiigsanaya ayuu go’aansaday inuu ka dagaallamo xasuuqii iyo tacadigii dadkiisa lagu hayey uu duurka u galay, iyadoon cidiba qaxin dagaalkii sokeeyee 1988 ayuu ka hor qaxoonti
ku noqday Ethiopia si uu ugu qayb qaato halgankii SNM. Kadibna, 30 sano ayuu nolol qaxoontiya iyo duruufo adag Yurub ugu soo noolaa.
Sida laga war hayo Maxamed Baashe wuxuu deeq-waxbarasha ah ku helay magaca SNM, wuu dafiray markii la soo ogaadayna wuxuu ku dacwiyay xusbi la yidhaa Xisbu
Daliic Soomaali oo Yementa ah baa I siiyay. Wuxuu inooga dhigayaa isagoo jabhad ah waxbarasho fiicanna aan dugsiyadii dhexe ku soo qaadan, oo dugsiga sarane kaga tagay Foom tuu markuu jabhadka noqday inuu imtixaan ku helay deeqda wax
barasho. Weelkii wax lagu siiyay ayuu dub ugu xaaray. Sida uu deeqdaa u dafiray ayuu Somalilandna u dafiray.
Maxamed Baashe bal qiray in deeq wax barasho la siiyay talow muxuu soo bartay darajadeebuuse gaadhay. Bal dadka ha u soo bandhigo cadaynta wuxuu bartay. Haduu wax bartay muxuu ugu shaqaysan waayayse.
Maxamed Baashe maanta waa in odaya oo da’ahaanna kulaalaya 70-kii. Dalkii uu isagoo dhalinyara waxbarashadiisii iyo mustaqbalkiisii u sadqeeyey waa xor, waa
dalalka Africa ugu nabadda badan kana dimuquraadisan dalalka badan oo Africa iyo Middle East. Dadkiisii xoreyntooda qoriga uu u qaatay badhaadhe iyo wanaag ayey ku nool yihiin dalkoodii oo xora. Haa, wali ictiraaf buura ah kumaynaan guulaysan
Maxamed Baashe-na ictiraaf raadinta Somaliland qayb weyn ayuu kasoo qaatay af iyo maalba 29 sano ee Jamhuuriyadda Somaliland soo jirtay uu ku noolaa dalalka Holland iyo UK.
Maxamed Baashe 37 sanadood ka hor buu qori u qaatay dawladii Soomaaliya, maantana 37 sanadook ka dib buu doonayaa inuu Somaliland kala daadiyo. Da’ weyni baa haysee oo maanta 70 jir qori kuma qaadan karayee, walaahi hadduu
karaayo inuu maantana qori qaadan lahaa. Bal car aynu eegno siduu Soomaaliya u kala daadiyo maalintuu ku biiro baaramaanka Fadaraalka ah. Wuxuu ku takhasusay wax duminta.
Qofka Ilaahay toobadda seejinayo isagoo waligiiba mu’min soo ahaa ayuun buu maalin karkaarka weydaariyaa, qofka Ilaahay sharafta ka qaadayaana isagoo waligiiba qof gob oo xariira soo ahaa ayuun bay maalin qudha ka sinbiririxootaa
halkaana ku ceeboobaa, magac xumo iyo taariikh xumo-na hantiyaa uu ilka la tagaa.
Maxamed Baashe wuxuu noqon doonaa nin intuu nool yahay ku nool magac xumo; taariikhda lagu xasuusan doonaa noqon mayso ninkii dadkiisa iyo dalkiisa usoo halgamay, ninkii qoray buugaagta qiimaha badan ee waxaa lagu xasuusan doonaa
ninkii wuxuu GAWSKA dhigo siistay dalkiisii iyo dadkiisii uu 33 sano usoo dagaalamay qaxoontina u noqday 30-ka sano.
Maxaa ku kalifay inuu maanta isagoo da’daasa Yurub ku nool, shaqaysan kara inuu Xamar iyo dawladda VillaSomalia 22.000 ee Ciidanka AMISOM ku ilaaliso inuu
gacanta hoos dhigto ?
• Arinta ugu weyn waa kursi jaceyl
• Cado ka dhalatay muxuu Kulmiye Xil iigu dhiibi waayey
• Yabaal ka dhashay 33-kii sano uu Yurub ku noolaa shaqo la’aantii noloshiisa
• Dhaqaale la’aan culays badan ku hayey maadaama Caydh uu ku noolaa
Haa, duruufahaa adag ee Maxamed Baashe ku soo noolaa qurbaha waa arin ay aad uga dharagsan yihiin badanka qurbajoog-ta reer Somaliland ee UK iyo Holland ku
nool ee Maxamed aqoonta u lihi. Allaah farajka bixiyee waxaa uga sharaf badnayd inuu sameeyo:
• Haddii uu xil ka waayey xisbiga Kulmiye intuu xisbiyada mucaaridka mid ku biro xilkaa uu raadinayo halkaa ka raadsho.
• Wax walba waa ‘’calaf’’ ee Haddii qurbihii uu kaga soo qaadi waayey intuu dhulkiisa hooyo kusoo noqdo ka shaqaysto.
• Ilaahay baa Risiqa bixiyee intuu Yurub iska aamino illaa inta uu gaadhayo
(Hawl-gabka – Pension ) halkiisaa iskaga cibaadaysto, carruurtiisa ag jooga
oo Nabiga ku salliyo. Intaa midna muu samayn oo sharaftiisa iyo hadafkii uu usoo halgamayey 33 sano
wuxuu aaminay barwaaqadii iyo xilkii uu raadinaayeyba inuu Xamar ka dhaw yahay, inuu guryihii Villa-da ahaa uu xooggiisa ku shaqaysan kari waayey Yurub xilkaa Xamar yaallaa uu ku heli doono ama judhaaba dawladda taagta daranee Farmaajo
markay aragto Maxamed Baashe oo TV-yada Somalia ka caayaya Somaliland uu Farmaajo Emergency budget degdega xawaaladaha ugu soo diri – waa siduu wax u
Maxamed Baashe Gobonimo iyo sharaf wuxuu ka door biday wuxuu Gawska dhigo - bal waan eegnaa inuu xilkaa Xamar ama kursiga baarlamaanka Somalia uu rabo uu ku badhaadho iyo inay xaadhato sidii kuwo badan oo isaga ka horeeyey ay u
xaadhatay. Waa 70 jir damiirkiisii iyo dadnimodiisiiba shilimo siistay. Waxaanu Illaahay kaaga baryeynaa inuu kusoo hadeeyo, muwaadin naga caasiyoobay baad noqoteee Aamiin !!.
Maxamed Xirsi ina-Tgdheer
MA, History & Social Sciences, University of Ankara
Writing a book about Somaliland History & the Genocide
Maxamed Xirsi can be reached at: [email protected]